Etu esi mepụta Mgbasa ozi vidio Instagram nke na-enweta nsonaazụ gị | Martech Zone
Mgbasa ozi Instagram na-eji usoro mgbasa ozi zuru ezu nke Facebook na nke niile na-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịdabere na ndị ọrụ dabere na afọ, ọdịmma na omume ha.
63% nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-arụ ọrụ na US zubere iwebata mgbasa ozi Instagram maka ndị ahịa ha.
Ma ị nwere azụmaahịa pere mpe ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ, mgbasa ozi vidiyo nke Instagram na-enye ohere dị ịtụnanya maka mmadụ niile iru ndị na-ege ha ntị. Mana, site na ọnụ ọgụgụ na - arịwanye elu nke ụdị ịbụ akụkụ nke Instagram, asọmpi ahụ na - agbasi ike na asọmpi.
Ugha ozo nke otutu mmadu nwere bu na imeputa ihe nlere vidio abughi dika ise foto ma obu imeputa ihe edere. Luckily, ị nwere ike ịmepụta ịtụnanya videos iji Ebe nrụọrụ eserese n'efu.
Ọ bụrụ na ị maghị okwu ahụ, eserese eserese bụ eserese na-enweghị eze na ị nwere ike ịzụta ikike maka site na weebụsaịtị dị iche iche. Onwekwara otutu uzo ichota. Nke a bụ ndepụta nke
Laa azụ na 2015, Instagram webatara mgbasa ozi Instagram nke na-enyere ndị nwe ụlọ ahịa aka iru otu ndị ọrụ ahụ wee mezie ha ka ha bụrụ ndị na-azụ ahịa. Site na iji mgbasa ozi Facebook, ndị na-ere ahịa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ nwere ike ịdabere na nke ọ bụla akọwapụtara nke ihe karịrị 600 nde ndị ọrụ Instagram na-arụsi ọrụ ike. Na mkpokọta, enwere ikike dị ebe ahụ, na-echere gị.
Pịgharịa gaa ala iji mụta ụfọdụ isi ihe metụtara na imepụta na ịgba ọsọ video dabeere na Instagram mgbasa ozi. Na mgbakwunye na nke ahụ, anyị ga-egosipụtakwa omume ole na ole kachasị mma iji tụọ ma melite arụmọrụ mgbasa ozi gị. Mana tupu nke ahụ, buru ụzọ lee anya na isi 5 nke mgbasa ozi vidiyo nke Instagram ị nwere ike ịgba ọsọ iji bulie ndị na-ege gị ntị.
Ofdị Mgbasa ozi vidiyo maka Instagram
Mgbasa ozi vidio na-eri nri - otu ụdị mgbasa ozi vidiyo nke Instagram nke mgbasa ozi vidiyo na-agwakọta na ndepụta nke onye ọrụ ma nyekwa ụzọ dị mma iji ruo ndị na-ege gị ntị.
Akụkọ banyere Instagram - mgbasa ozi vidiyo zuru oke nke na-egosi n’etiti akụkọ dịka ndị ọrụ 400mn na-ahụ kwa ụbọchị (site na ndị ọrụ ha na-eso). N'ihi na Akụkọ banyere Instagram gosipụta na windo ejiri awa 24, ha dị mma maka mgbasa ozi mgbasa ozi na azụmahịa na onyinye dị oke oge.
Mgbasa ozi Carousel - Site na mgbasa ozi Carousel, ndị na-ere ahịa nwere nhọrọ iji kwalite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ a kapịrị ọnụ site na igosipụta usoro vidiyo nke akara nke ndị ọrụ nwere ike swipe site. Ọnọdụ a dị mma maka ụdị ndị na-achọ ịzụ ahịa ọtụtụ ọdịnaya ma ọ bụ naanị chọọ igosipụta ozi zuru ezu banyere ndị ha bụ na ihe ha na-enye. Na mgbakwunye na nke ahụ, ha nwekwara ike ịgbakwunye njikọ na weebụsaịtị nke ngwaahịa ahụ iji duzie ndị ahịa nwere mmasị ịzụrụ ngwaahịa.
30-Seconds Video Mgbasa ozi - Ihe ngosi vidiyo nke 30 nke abụọ bu nke Instagram webatara iji gbalịa imepụta ihe nkiri cinematic mmekọrịta maka ndị ọbịa nke na-akpali ha site na ịmịpụta ihe ngosi anya.
Instagram Marquee - Instagram ewebatala ngwa ọrụ ọzọ akpọrọ 'Instagram Marquee' nke na - enyere ndị ahịa aka ịgbasa ma gbasaa ndị na - ege ntị na obere oge.
Ibido na Instagram Video Ads
Tupu ịmalite n'ezie ịmepụta mgbasa ozi gị, ọ dị mkpa ịmụ ụfọdụ ihe ndị dị mkpa nke nwere ike imetụta ogo na arụmọrụ nke mgbasa ozi Instagram gị:
Instagram na-enye ohere a ogologo nkọwa nke ihe kariri 2200 odide. Ma, gbalịa ka ị gafere mkpụrụedemede 135-140 maka nsonaazụ kacha mma
The ogologo nke vidiyo gafere 120 sekọnd
Faịlụ vidiyo ahụ ga-adịrịrị MP4 ma ọ bụ MOV Ọkpụkpọ na nha faịlụ ọ bụla ọ bụghị ibu karịa 4GB
In-feed video mgbasa ozi agaghị agabiga 600 × 750 (4: 5) maka vidiyo vidio. N'ihe banyere vidiyo ala, mkpebi ahụ aghaghị ịbụ 600×315 (1:91:1) mgbe maka vidiyo vidiyo, ọ kwesịrị ịdị 600 × 600 (1: 1)
Maka akụkọ Instagram, mkpebi ahụ ga-adị 600 × 1067 (9: 16)
Maka mgbasa ozi vidiyo vidiyo Carousel, mkpebi kacha mma bụ 600 × 600 na akụkụ 1: 1
Ugbu a, site na ahụmịhe nke onwe m mgbe m nyechara ọrụ mmezi vidiyo na ọtụtụ narị ndị okike ọdịnaya, achọpụtara m na 1: 1 na 4: 5 mgbasa ozi vidiyo na-eme nke ọma. Yabụ, mgbe ọ bụla i nwere ike, gbalịa ịrapara n'akụkụ ahụ.
Etu esi emepụta mgbasa ozi vidiyo nke Instagram na - enweta nsonaazụ gị - Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ
Luckily, e nweghị roket sayensị abuana ke eke elu-edu Instagram video Mgbasa ozi esighi na. Naanị, gbasoo usoro ndu usoro isii a iji bido:
Kwụpụ 1: Họrọ Ebumnuche
Izizi na nke kachasị mkpa, ị ga-ahọrọ otu ebumnobi. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ị ga-akọwa nke gị ahia ebumnuchen'okpuru ụdị a iji gosipụta ihe mgbaru ọsọ ị chọrọ ka mgbasa ozi gị nweta. You na-achọ ime ka mmata mara ma ọ bụ ebumnuche gị bụ ịkwalite ahịa gị? Kpachara anya na ịhọrọ azịza nke ajụjụ ndị a n'ihi na ọ nwere ike imetụta ọnyịnye ahụ ma nyere gị aka ịbịakwute ndị na-ege gị ntị ịchọrọ nke nwere ike ịza mgbasa ozi gị.
Nzọụkwụ 2: Họrọ Targeting Targeting
Nke a bụ akụkụ ọzọ dị mkpa nke na-emetụta ntụgharị gị nke ukwuu. Ọ bụrụ na ezubere iche adịghị arụ ọrụ, ịgaghị enwe ike ịdabere otu ndị ọrụ akọwapụtara. Nwere ike ịhọrọ ọnọdụ, afọ, asụsụ, okike ma ọ bụ nhọrọ ọ bụla ọzọ echere. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịtụle otu afọ ọ bụla nwere ụdị ibi ndụ, ị nwekwara ike ime ya.
Yabụ gbaa mbọ hụ na ịnwere ndị na-ege ntị na-elele ma ọ bụghị ọ dịghị onye ga-ele ọdịnaya gị.
Kwụpụ 3: Dezie Ọnọdụ gị
Mgbe ị na-ahọrọ ndị na-ege gị ntị na-ezubere iche, họrọ ntinye. Mgbe ị pịrị nhọrọ a, enyerela Instagram na Facebook ohere. Ohaneze, ị ga-edobe ihe ndị a niile iji nweta nsonaazụ kacha mma. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnwere mmasị ọ bụla ma ọ bụ na ịchọrọ iwepu ihe ọ bụla akọwapụtara, ị nwere ike idezi nhọrọ iji kwekọọ na mkpa gị.
Nzọụkwụ 4: Mmefu ego na nhazi oge
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ akwụkwọ ntuziaka, ị ga-edozi ego gị wee kwuo maka mgbasa ozi gị. Ihu ọma, mmefu ego gị gosipụtara ngụkọta ego ị dị njikere itinye ego maka otu pịa / ụfọdụ ọnụọgụ ma ọ bụ na ihe ọ bụla ọzọ. Nzọụkwụ a na - enye gị ohere ịtọ ntọala mmalite na njedebe nke mgbasa ozi gị.
Kwụpụ 5: Mepụta Ad
Yabụ, ị dịla njikere ịmepụta mgbasa ozi Instagram gị. Naanị, họrọ ụdị mgbasa ozi masịrị gị ma tinye ihe niile n'ọnọdụ ya. Ọzọkwa, dị njikere ịhụchalụ vidiyo vidio gị iji lelee etu ọ ga-esi dị na ntanetị. Jide n'aka na mgbasa ozi gị dị oke mma na ebe ọ bụla a na-akụkwa ya n'ụzọ zuru oke. Gụnye njikọ ịchọrọ ka mgbasa ozi gị were ndị ọrụ gaa na peeji ọdịda ka ọ ga-adọta ndị na-azụ ahịa ma bulie ahịa. Echefukwala itinye oku dị ịtụnanya iji rụọ ọrụ (CTA) iji kpalie ndị ọrụ pịa njikọ gị. N'oge a, ị nwekwara ike ịgbakwunye na gị oyiri n'ọtụtụ asụsụ ma ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya na-ege ntị na-asụ asụsụ abụọ.
Kwụpụ 6: Nyefee Ad gị maka nyocha
Jiri nlezianya nyochaa mgbasa ozi gị maka oge ikpeazụ ma ọ bụrụ na ihe niile dị oke mma na ebe ọ bụla, nyefee ya maka nyocha. Ọ ga-ewe ọtụtụ ụbọchị ka e nweta nnomi gị.
Nde dollar Instagram Video Ad Atụmatụ
Mepụta nko zuru oke - Buru n'uche, ndị ọrụ Instagram na-agagharị ngwa ngwa site na akụkọ ozi ha, yabụ ị ga-eme obere sekọnd mbụ nke mgbasa ozi gị. N'eziokwu, ị kwesịrị ị na-agụnye Nkea na omume na mbụ 3 sekọnd nke gị video jidere uche. Ọ bụrụ na sekọnd ole na ole nke mgbasa ozi gị dị nwayọ nwayọ, ndị ọrụ ga-agagharị site na-ahụghị vidiyo gị.
Edezi vidiyo - Creatmepụta monger banger nke na-apụta site na okpueze dị oke mkpa. Ya mere na-eleghara anya ọ video edezi usoro. Emechaa eserese, etinyela ihe osise na Instagram. Wepụta oge dezie vidiyo gị n'ụzọ na-adọrọ adọrọ, nke na-adọrọ mmasị.
Tinye ederede - Ebe ọ bụ na, ọdịyo nhọrọ edoziri na ogbi na ndabara, ị ga-agbakwunye ụfọdụ ederede iji mee ka ozi gị gafee. Enwere ọtụtụ ngwa dị ugbu a dị ka Apple Clips nke nwere ike inyere gị aka ịmepụta mmetụta ederede dị ike iji dọta uche.
Gbanwee Nsogbu - Ebumnuche bụ isi nke ịmepụta mgbasa ozi Instagram bụ ịmata nsogbu ma chepụta azịza zuru oke n'ụdị ngwaahịa / ọrụ ahụ. Mgbe mgbasa ozi gị na-enye echiche nke onye na-achọpụta nsogbu, ọ na - amalite inwe mmetụta nke mmụọ na onye ọrụ ahụ ozugbo. Ozugbo inwetara ha nke ọma, gosi ha otu ngwaahịa / ọrụ gị nwere ike ịbụ onye nzọpụta maka ha.
Zere Ikwu Okwu Ndị Dị Ogologo - Ọ bụ ezie na Instagram na-enye ohere ka mkpụrụ edemede 2200 maka nkọwapụta, ọ kachasị mma idobe ya na nkenke. E kwuwerị, ọ dịghị onye chọrọ ịgụ nnukwu ederede nke ederede mgbagwoju anya. Ya mere, gbaa mbọ hụ na ị gafere mkpụrụedemede 130-150 mgbe ị na-ede ederede maka mgbasa ozi Instagram gị.
Gbado anya na Nzube Otu - Kama ilekwasị anya n'ọtụtụ ebumnuche, gbalịa ịrapara na otu ebumnuche. Ọ bụrụ na mgbasa ozi gị gụnyere ọtụtụ ere ahịa, ọ ga-adị ka ọkwa na ndị ọrụ ga-agagharị na mgbasa ozi gị.
Ngwakọta Organically - Mgbasa ozi ị mepụtara ekwesịghị ịda ụda nke nkwalite ma gha jikọọ ọnụ na ntanetịime Instagram. Buru n’uche, ebumnuche gị bụ ịdọrọ uche ndị na-ege gị ntị wee nye ha ụzọ kachasị mma maka nsogbu ha.
ule - Dị ka o kwesịrị, ị kwesịrị ịmepụta ọtụtụ nsụgharị nke mgbasa ozi vidiyo gị iji chọpụta nke na-arụ ọrụ nke ọma na ndị na-ege gị ntị. Jide n'aka na mgbasa ozi Instagram gị na-enye nnukwu ahụmịhe na ndị ọrụ na-aga na ntụgharị.
Instagram nwere ike ịbụ nnukwu ikpo okwu ịzụ ahịa, na-enyere gị aka ọ bụghị naanị ịmepụta mmata mara ma gbasaa akara gị site na vidiyo na mmekọrịta anya na mmekọrịta, kamakwa ị na-ebugharị okporo ụzọ na weebụsaịtị gị ma kwalite ntụgharị.
Kedu aro ndị ọzọ ị ga-agbakwunye na ndepụta a? Kedu nke ị na-eme atụmatụ ibubu ụzọ? Mee ka m mara na ngalaba nke dị n'okpuru ebe a, m ga-enwekwa obi ụtọ isonyere mkparịta ụka ahụ.
Tags: ka esi edozi vidiyo vidiyoinstagram mgbasa oziinstagram carousel mgbasa oziinstagram vidiyo adinstagram video ad sizeNdụmọdụ vidiyo vidiyo instagramNzọụkwụ mgbasa ozi vidiyo instagramNtuziaka vidiyo instagramdezie vidiyo vidiyoederede vidiyo instagramvidiyo instagram